Galmee Seenaa Jen. Taddasaa Birruu | Fighting for Freedom and Equality
Galmee Seenaa Jen. Taddasaa Birruu
Posted by Gishe Abdi Wako on December 10, 2013
June 21, 2009 at 8:49 pm · Gadaa.com
Dhalonni karaa adeemadha.
Karaa ademuu kana irraa eenyu iyyuu hafuu hindanda’u! kan haafu yoo jiraate, bara jireenya isanii keessa,gochaleewaan garii ykn badii isaan ummata isaniif ummata isanii irraatti dalagan ta’u isaati. Seenaan badii, akkuma badii isaatti,garii ammoo akkuma garummaa isaatti ,dhaloota harraaf boritti qadadee olka’a.
Adeemsa dandii Qabsoo Blisummaa Oromoof godhamuu keessaatti, Lammii kana keessaa ba’anii, Ummata irraa dhalatan kanneen gita bitootaf dabarsuun Ummurii gabirrummaa Oromoo irraatti dhereessan, akkuma jiran,Ummurii gabirrummaa gababisuun, Lammii isanii abbaa biyyummaa isaa dhugomsuuf jeecha, biqiila blisummaa biqilchanii kanneen darban seenaan galmee issaa keessatti, bakka kabajaa kenneerafi.
Seenaan Yoom illee irraanfachuu kan hindandeenye, Hangafiticha bu’uressaa Qabsoo blisummaa Oromoo kan ta’n seenaa Jen.Taddasaa Birruu dhaloota irraa hanga gaafa Dargiidhaan ajjeefamanitti Cunfaa isaa gababisee dhiyeessera.
Jen. Taddasaan Birruu bara 1914 koonyaa Salalee anaa Aboteetti dhalatani.
Akkuma Ummuriin isaani barumsaaf eeyameetti mana barumsaa galee osoo barachaa jiiruu, Waranni Mootummaa Xaliyanii Ithiophiyaa yeroo weeraruu abbaan isaa , Obbo Birruu kennee dinni, adiif gurraacha hinqabuu jechuun, warana Mosolonii xaliyanii meeshaa warana ammayyaa hidhatee dhufe falamii gochuuf murtefatani.
Obbo Birruu kennee Ilma isanii Taddasadhan Qe’ee egaa barumsa kee akka itti fufituu jeechuun, Gootummadhaan maatiif qe’ee isanii dhisanii, warana weerarituu Xaliyanii falimitti qajeelan. Obbo Birruu kennee, warana diinaa hanga funyanitti hidhateen heedduu falmaa erga turanii booda, Summii diinaan isaan irraatti dhukafameen gubatanii du’an.
Haatii manaa isanii ajjeefamuu Obboo Birruu kennee yeroo dhaga’an, naasuu irraa dandamachuu dhabuun, Obbo Birruun ajjeefamanii guyyaaq 80tti Taddasaa kophatti dhisanii, isa dhumaaf ciqilee isaan borafatan.
Taddasaan dhalatee waggaa 14tti hadhaaf abbaa isaa dhabe.
Gaddi dachaa, dhachadhaan irraatti waliga’e. halkaniif guyyaan itti dukanawe. Jireenya gaddisisaa kana keessa osoo jiruu, yannii tokko dhufeef innis” kanneen abbaa isaa ajjeesanii hadha isaas akka duutu godhan ajjesee du’uu tuure.
Bosoona seenuu Jen. Taddasaa
Ummurii waggaa 14 osoo hinqaxamuriin, Taddasaan kutannodhaan bosoona seenee gumaa abbaa isaa basuuf, falmiif of qopheesee, irriyoota isaa nannoo hidhabuu Abotee jiran waliin bosoona galuun Bandoota xaliyanii waliin falammii wali irraa hincinnee gochuu calqabe.
Onnee Jaginnummaa keessaa dha’atuu malee Taddasaan warana hanga funyanitti hidhateen falmee
Injifachuu akka hindandeenye nibeeka.
Hata’uu malee guyyaa gaafa tokko, warana Xaliyanitiin marfamani sa’a 24 ol gootummaan fuula fulaatti amma dhumatti falmaa erga turani booda harka warana xaliyanitti kufan.
Taddasaan Gara Buufata (Base) warana Xaliyanii Moqadhootti ergame
Jen. Taddasaan Dhalootuma isaa irraa egalee Jaginnumaan kan gutameedha.
Ummurii kanaan bandoota Xaliyanii funduura dhaabatee looluu isaa rajjefgachudhaan, mana hiidha Fichee irraa gara finfinneetti dabarsuun, da’iima waggaa 14 barumsaaf goorsa barbachiisu keennaniifii gadi dhisuu osoo irraa jiiru, gara buufata isaani Moqodishootti erguun, Ummurii gutuu hidhamanni akka hojii umminaa hojjatan itti murtefaame.
Biyyaaf nama hinbekinnee keessatti murittiin itti jiige kana waliin Jen Taddasaan qabsoo Calqabe. Jireenyii isaa halkanii guyyaa hojii ummina hojatuu ta’e
Jireenya umama nama jibisiisuu kana keessa osoo jiiru,warannii Adduyaa lammata yeroo injifannoon xumuramuu Xaliyaniin Ithiopiyaa keessaa yeroo baatu ,Sumaliyaa keessaas ba’uun dirqii waan ta’eef
Sumaliyaan harkka Birtishitti kufte.
Taddasaan hidhaa Fashistoota jalaa ba’ee rayyaa warana Birtish keessatti qaxaramee yeroo gababaa ajajaa shantamaa ta’ee osoo tajajilaa jiruu gara biyyaa isaatti deb’ee.
Report Continues to the Next Page
← The man who taught Mandela to be a soldier
Nelson Mandela memorial service: Transcript of President Barack Obama’s speech President Obama addressed the crowd Tuesday at Nelson Mandela’s memorial service in Johannesburg. →